Qiimaha Saacadda khaliifka dowladda Islaamiga ah, Albaqdaadi! – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Qiimaha Saacadda khaliifka dowladda Islaamiga ah, Albaqdaadi!
Mareeg.com: Saacad gacanta midig ugu xirneyd hogaamiyaha dowladda Islaamiga ah (Ex-Daacish), Abuubakar Al-baqdaadi oo todobaadkii tegay markii ugu horreysay khudbad toos ah ka jeediyey masjid ku yaallada magaalada Muusil ee dalka Ciraaq ayaa soo jiidatay indhaha dad badan oo ku nool caalamka, iyadoo la sheegay in saacadaas ka mid tahay kuwa ugu qaalisan dunida.
Wargeyska Sunday Telegraph ee kazoo baxa dalka Ingiriiska ayaa si gaar ah diiradda u saaray saacadda uu xirnaa Abuubakar Al-baqdaadi, wuxuuna xusay in laga yaabo iney qiimo ahaan gaareyso $6,000 (Lix kun dollar).
Al-baqdaadi oo markii uu magaalada Muusil ka haldayey xirnaa dharkii madoobaa iyo cimaamaadii lagu yaqaannay Khaliifihii ugu dambeeyey Musliliinta ee Baqdaad ayaa ugu baaqay Muslimiinta iney ka qeybqaataan Jihaadka, islamarkaana ku biiraan dowladdiisa.
Wargeyska ayaa sheegay in saacadda gacanta midig ugu xirneyd Abuubakar Al-baqdaadi ay aheyd ROLEX ama OMEGA midkood, oo qiimo ahaan jooga lacaga dhan 3500 oo Geniga Istarliinka ah, una dhiganta $6000 oo dollarka Mareykanka ah.
Dad badan oo daawaday muuqaalkii uu soo diray Albaqdaadi ayaa faalooyin ka bixiyey saacadda uu xirnaa iyagoo adeegsanayey baraha bulshada sida Facebook iyo Twitter.
Mid ka mid ah dadkaas ka faaleeyey saacadan ayaa qoray “Khaliifaheenna Allaha ka raalli noqdee wuxuuna xirnaa saacad Switzreland soo saartay, laakin su’aasha ayaa ah, xaguu kala yimid lacagteed?”.
Qof kale ayaa Twitter ku qoray “Ma ogtihiin waxa ay tahay saacadda Kahliifaha Dowladda Islaamiga ah?”.
Amiirka dowladda Islaamiga ah, Abuubakar Al-baqdaadi ayaa haatan loo arkaa inuu yahay hogaamiyaha kooxda ugu awoodda badan Islaamiyiinta ka dagaallama caalamka, isagoo maamula qeybo badan oo ka mid ah Ciraaq iyo Suuriya.
Gabdho farabadan oo ka baxsaday Boko Xaram
Saddex ku dhimatay shil gaari oo ka dhacay wadada Muqdisho & Afgooye